दुईजनालाई इँटाभट्टामा हालेको आ'रोपमा आलम जे'ल, पाँच हजार मा'रेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई के ? - Sidha News
दुईजनालाई इँटाभट्टामा हालेको आ’रोपमा आलम जे’ल, पाँच हजार मा’रेको स्वीकार्ने प्रचण्डलाई के ?
काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक दण्डहीनताको पराकाष्टा कति रहेछ भन्ने सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ ।मुलुक शान्ति प्रक्रियामा हिँडेको १३ वर्ष पूरा भइसक्दा अझै द्व’न्द्वपी’डि’तलाई न्याय दिइएको छैन । बे पत्ताको खोजी भएको छैन । घा’इतेहरुको उचित उपचार र पुनव्र्यवस्था भएको छैन । लु’टिएका सम्पत्ति फिर्ता भइसकेको छैन । विस्थापितहरु अझै आफ्नो थातथलो फर्किने दिन कुरेर बसेका छन् ।
तर, माओवादी यु’द्धको नेतृत्व लिएका प्रचण्ड आफूले पाँच हजार मानिस मा’रेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमबाट जिम्मेवारी लिइरहेका छन् । गर्वका साथ उनले आफूले पाँच हजार नागरिक मा’रिएको जिम्मेवारी लिने, तर १२ हजारको नलिने बताएका छन् । उनले सधैं आफूलाई १७ हजार नागरिक मा’रेर आएको आरोप लगाउने गरेको भन्दै पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी आफ्नो रहेको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
दुईजनालाई जि’उँदै इँटाभट्टा’मा हालेर मा’रेको किटानी उजुरीको आधारमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलम अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पाँच हजार नागरिक मारेको स्वीकार्ने प्रचण्ड भने खुलेयाम हिँडिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमै उनले जिम्मेवारी स्वीकार गरेको भन्दै अहिले उनको चर्काे आ’लोचना भइहरेको छ।
काठमाडौंमा माघी पर्वका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजार जनाको मात्रै आफूले जिम्मा लिने’ भन्दै प्रचण्डले भने, ‘मैले १७ हजार मानिस मा’रेर आएको भन्ने तथ्यांक भनिन्छ यो सत्य होइन । सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मा’रेको हो । तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु । राज्यले मा’रेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।’
हो, प्रचण्डले भने जस्तै सबै उनले मा’रेका होइनन् भने आरो’प लगाउनु न्याय हुँदैन । तर, पाँच हजार मा’रेकालाई राज्यले कारबाही नगर्ने हो भने मृत’क र मृ’तकको परिवारमाथि पनि न्याय हुँदैन । द्व’न्द्वकालीन घ’टनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेप त्ता छानबिन आयोगमार्फत न्याय निरुपण गर्ने सरकारको लक्ष्य राजनीतिक दल र तिनका नेताको छायाँमा परेका बेला प्रचण्डले सो अभिव्यक्तिले द्व’न्द्वपी’डितको घाउमा नूनचु’क लगाउन काम गरेको छ । न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनुसरह हुने कानुनी कथन छ ।
माओवादी यु’द्ध समाप्त भएर शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाबाट संविधान जारी भइ दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेर प्रचण्डको पार्टी नेकपाले सरकार चलाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, माओवादी यु’द्धकालमा जनतालाई देखाइएका सपना र आशा उनले कति पूरा गरे ? तर, दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले पाँच हजार नागरिक मा’रेको स्वीकार्ने अभिव्यक्ति दिएर पी’डि’तको घाउमाथि नूनचु’क लगाउने काम गरे।
उनी बेलाबेलामा वि’वादस्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गएको मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले सशस्त्र द्व’न्द्वका क्रममा भएका ’सबै राम्रा नराम्रा घ’टनाको जिम्मेवारी लिने’ बताएका थिए । यसअघि गएको साउनमा पनि एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई ‘हेग पु¥याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने’ बताएर स’नसनी म’च्चाएका थिए ।
द नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवतावि’रुद्धको अ परा धलगायत विषयका मु’द्दा हेर्ने गर्छ। जहाँ प्रचण्ड उभ्याउने पूर्वबाल लडाकु लेनिन विष्ष्टले चे’तावनी दिएपछि प्रचण्डले आफूलाई हेग पुर्‍याइए संसारकै हिरो भएर निस्कने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
दस वर्षे माओवादी सशस्त्र यु’द्धमा कति मानिस मारिए भन्ने यकिन तथ्यांक नरहे पनि तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित एउटा कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार द्व’न्द्वकालमा कुल १८ हजार १६५ जना मा’रिएका थिए । यद्यपी यो तथ्यांकलाई सबै स्वीकारेका भने छैनन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १७ सय जना बे’पत्ता भएका छन् भने १३ हजार २८७ जना अ\_पांग भएका छन्। त्यसैगरी एक लाख नौ हजार ६१६ जना विस्थापित भएको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छ ।